Retail Archives - Hissho Sushi
စက်တင်ဘာ 14, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Chew Boom, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
Sushi distributor Hissho ဆူရှီ has partnered with hot sauce brand Franks RedHot for the creation of the new Franks RedHot Crunchy Buffalo Chicken Roll.
စက်တင်ဘာ 7, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Thrillist, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဩဂုတ် 31, 2021 တည်နေရာများသတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Community Impact, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဩဂုတ် 31, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Refrigerated Frozen Foods, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဩဂုတ် 30, 2021 အသံလွှင့်သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
ပုံပြင်မူလကအပေါ်ထုတ်လွှင့် WCNC-TV NBC-Charlotte
ဩဂုတ် 30, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Provisioner Online, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဩဂုတ် 27, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on Perishable News, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ဩဂုတ် 27, 2021 အသံလွှင့်သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
ပုံပြင်မူလကအပေါ်ထုတ်လွှင့် WBTV-TV CBS-19 News
ဩဂုတ် 26, 2021 အသံလွှင့်သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
ဩဂုတ် 26, 2021 သတင်း က globaladmin0မှတ်ချက်များ
Article Originally Published on WRAL-TV, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.